Cuntada caadiga ah ee keegga jilicsan ee jilicsan + jiis baraf ah - Keega
Cunto macmacaan casaan jilicsan oo casaan ah oo lagu sameeyay subag iyo khal oo loogu talagalay dhadhanka keegga ah ee jilicsan ee dhabta ah
Tani karinta cas maro jilicsan waa maxay keega dhabta ah ee jilicsan ee jilicsan waa inuu dhadhamiyaa! Lagu dhajiyay farmaajo barafoobay , Waxaan ugu dambayntii gartay sababta ay dadku u jecel yihiin keeg dhab ah oo jilicsan oo casaan ah. Keegani waa subag, jilicsan oo runtiina ku nool illaa waa sharaxaadda velvet. Keeggan sidoo kale waa lammaane aad u fiican oo leh Ermine dhaxan ama tayda frosting buttercream fudud .
Cuntadani waxaa laga cusbooneysiiyay miisaskii hore ee aan isticmaali jiray oo ay ka fiican tahay milyan jeer! Taasi waa sheyga leh dubista, marwalba waad baraneysaa oo aad hagaajineysaa. Waxaan doonayay cunto karinta keega jilicsan ee casaanka ah oo ahayd mid heer sare ah oo aan aheyn kaliya vanilj keega oo midabkiisa cuntada lagu daro (yuck). Waxaan ku tijaabiyey macmacaankan macmacaanka uu ugu jecelyahay keegga digaagga uu ahaa maro jilicsan oo casaan ah waxayna tiri waa tii ugu fiicneyd ee ay soo marto sidaa darteed waxaan u maleynayaa inay taasi tahay guul
sida loo sameeyo keega vanilla ka xoq fudud
Miyay keeg jilicsan oo casaan ah oo kaliya karinta keeg shukulaatada leh midabaynta cuntada cas cas lagu daray?
Keega jilicsan ee jilicsan maahan oo keliya keeg shukulaato ah oo lagu daro midabaynta cuntada cas. Xaqiiqdii, keegga jilicsan ee jilicsan ee asalka ah ayaa magaceeda la helay maxaa yeelay caanaha subagga iyo khalku waxay si dabiici ah u soo saaraan gunta hoose ee budada kookaha, iyagoo siinaya keegga midab casaan ah. Buttermilk iyo khal sidoo kale waxay jebiyaan gluten-ka daqiiqda ah taasoo keeneysa keeg badan oo jilicsan taas oo u badan tahay sababta ay u heshay naaneysta velvet casaan.
Dabcan sanadihii la soo dhaafay midab yar oo midab casaan ah ayaa lagu daray si loo xoojiyo midabka waxa aan maanta aragno, taas oo ah sababta ay dadku ugu jahwareeri karaan waxa dhadhanka ah ee runta macmacaanka ah ee loo yaqaan 'velvet cake recipe' ay tahay inay noqoto. Qaar ka mid ah kuwa wax dubta oo aan khibrad lahayn ayaa xitaa ku dari kara midabaynta cuntada casaanka keega vaniljka. Midabaynta cuntada cas waxay dhab ahaantii dhadhamisaa dhab ahaantii qadhaadh sidaa darteed haddii aad waligaa lahayd midab aad u badan oo midabkeedu yahay casaan jilicsan oo jilicsan, waxay u badan tahay inay dhadhamisay runtii xun.
Muxuu dhadhamiyaa rootiga jilicsan ee jilicsan ee dhabta ah?
Cunto macaan oo casaan jilicsan ayaa lagu sameeyaa caano caano, khal iyo xoogaa yar oo budada kookaha ah. Waxyaabahani waxay keenaan keeg aad u macaan oo leh calaamado shukulaato ah. Tani waa isku dhaf dhadhan quruxsan oo gaar ah laakiin markaad ku darto qaar ka mid ah farmaajada qaboojiyaha ama ermine dhaxan (qaboojinta caadiga ah ee keega jilicsan ee cas), ka dibna waxay ku dareysaa xitaa dhadhan dhadhan badan. Dhadhankaas dhadhanka ahi waa calaamadda saxanka roodhida velvet runta ah.
yaa neville ku guursaday Harry Potter
Maxay keegga jilicsan ee jilicsan u yahay dhadhan caan ah?
Anigu shaqsiyan waxaan u malaynayaa in keega jilicsan ee casaanka loo yaqaan ay caan ku tahay laba arrimood. Dadka qaarkiis waxay heleen cunto karinta 'velvet' runta ah oo run ah wayna jecelyihiin! Ma eedeynayo iyaga, runti waa macaan. Qodobka kale ayaa ah inay tahay dhadhan keeg oo aad u muran badan. Haddii aanad haysan keeg runtii jilicsan oo casaan ah oo aad la xiriiriso keegga kaliya keega casaanka ah ee caatada ah markaa ma arki doontid waxa weyn ee heshiisku yahay.
Mar kasta oo khilaaf u dhexeeya waa wax fiican ama maahan, had iyo jeer wuxuu noqdaa mid caan ah. Farshaxan ayaa ku jirta odhaah, haddii ay fiicantahay markaa dadku ama way jeclaan doonaan ama nici doonaan. Haddii qof kastaa dareemayo 'ok' oo ku saabsan, markaa waa uun meh. Waxaa la mid ah keega, dadku waxay u muuqdaan inay jecel yihiin ama neceb yihiin keega jilicsan ee casaanka ah.
Cunto fudud oo fud fudud oo jilicsan
Waayahay kani waa runta kaliya ee keega la karinayo ee aan sameeyo taasi oo ah hal qaab baaquli. Caadi ahaan waxaan doorbidaa qaab isku dhafan oo sax ah sida habka kareemada gadaal. Cuntadan keegga jilicsan ee jilicsan ayaa ah mid aad u fudud!
Kaliya isku dar bur, sonkor, budada kookaha, milix iyo soodhaha baaquli ku jira.
Isku kari ukunta, saliidda cuntada, caano subagga, subagga la dhalaalay, khal, vanilj iyo midabaynta weel gaar ah.
Si tartiib ah ugu dar maaddooyinka qoyan qalalan kuna qas hal daqiiqo. Waxaad ku sameyn kartaa tan gacanta ama mashiinka istaagga leh lifaaqa suufka.
Ku shub baytari labo 8 p digsi keega wareega ah oo dub!
Waxaan jecelahay inaan barafoobo oo aan keega ku buuxiyo qaboojiyaha farmaajada ka dibna aan isticmaalo qaar ka mid ah jarista keega (ka saarista qubbadda) si aan ugu sameeyo daahan qurxinta keega qurxoon dusha. Ku qurxin shukulaato yar oo cad iyo buuq! Taasi waa hal keega quruxda badan ee jilicsan.
Sida loo sameeyo keeg lakab jilicsan oo jilicsan oo leh jiis baraf ah
Ka dib markii keegagteyda la dubay oo aan u daayay inay qaboojiyaan, iska jar korkooda doolladaada si aad u waasaciso. Lakabkaaga koowaad saar dusha keegga ama saxanka ballaaran ee fidsan.
Ku dar qaado badan oo farmaajadaada barafoobay oo ku faafi lakabka keegaaga adoo adeegsanaya spatula ka baxsan. Waxaan ka dhigayaa qabowgeyga qiyaastii 1/4 ″ qaro weyn. Kadib dusha lakab kale oo keeg ah dusha sare. Ku celi lakabka ugu dambeeya.
Ku fidi in badan oo dhaxantaada lakab khafiif ah dhammaan keega. Tan waxaa lagu magacaabaa jaakad jajaban oo macno ahaan ku shaabadeeysa jajabka oo dhan si aysan u gelin jaakada ugu dambeysa ee dhaxanta. Qabooji keega 20 daqiiqo si aad u adkeyso jaakada jajaban.
Ku dar lakab kale oo ah buttercream keegaaga la qaboojiyey oo aad si siman ugu xoqdid kursiga keydka ama spatula ka baxsan. Ujawaab wax badan buu ka caawiyaa hawshan.
Marka xigta, jajab korkyada keega oo ku dar dusha sare ee keegaaga iyo dhinacyada qurxin ahaan.
Ku dhammee keeggaaga qaar ka mid ah dollobo yaryar oo buttercream ah oo ku wareegsan hareeraha banaanka! Dhammaan waa la qabtay!
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan cuntadan keegga jilicsan ee jilicsan
Cuntadani ma laga dhigi karaa keega? - Haa xaqiiqdii waad u isticmaali kartaa qashinkan koobabka. Marar badan ayaan sameeyay iyaga oo runtii sifiican ayay u soo baxaan. Kari 5 daqiiqo 400ºF ka dibna u dhig 350ºF ilaa 10-15 daqiiqo ama ilaa keega lagu dhejinayo bartamaha. Ha ka buuxin safka buskudka wax ka badan 2/3 ee jidka oo buuxa ama way buuxsami doonaan oo burburi doonaan.
yaa fuck waa amber rose
Maxaan isticmaali karaa haddii aanan lahayn caano subag? - Waxaad u adeegsan kartaa qadar la mid ah (culeys ahaan) labeen dhanaan ama waxaad ku dari kartaa 1 Tbsp oo khal oo caano caadi ah u daa oo ha fariisataa daqiiqado yar ilaa ay ka bilaabaneyso curdle si ay u sameyso caano subag oo guriga lagu sameeyo.
Miyaan ka tagi karaa midabaynta cuntada cas? Haa waad awoodaa laakiin keegga gudaha gudaha aad ugama casaan doono.
Cunto macaan oo dhab ah oo casaan jilicsan ah. Hal baaquli, hal spatula, hal keeg oo cajiib ah! Keegga waa mid aad u fudud oo jilicsan oo aad u qoyan. Aad ayuu ugu fiicanyahay qaboojiyaha farmaajada ama ermine buttercream! Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:40 daqiiqado Kalori:446kcal
Waxyaabaha Cake Casaanka ah
▢14 ounces (397 g) Burka AP
▢14 ounces (397 g) Sonkorta dahaaran
▢laba Miisaska cuntada lagu kariyo (laba Tbsp) budada kookaha
▢1 qaaddo shaaha (1 tsp) cusbo
▢1 qaaddo shaaha (1 tsp) Fixiso
▢laba weyn (laba) ukunta qolka
▢8 ounces (227 g) caano subag qolka
▢1 Miisaska cuntada lagu kariyo (1 Tbsp) khal khal ah
▢6 ounces (170 g) subag aan cusbo lahayn dhalaalay laakiin aan kululayn
▢1 qaaddo (1 tsp) vanilj
▢1 Miisaska cuntada (1 Tbsp) midabaynta cuntada casaanka ah Waxaan door bidaa americolor super red maxaa yeelay dhadhan ma lahan
Waxyaabaha ay ka mid yihiin kareemka farmaajo barafoobay
▢12 ounces (340 g) farmaajo jilcisay
▢1/2 qaaddo shaaha (1/2 tsp) liin dhanaan
▢1/4 qaaddo shaaha (1/4 tsp) cusbo
▢26 ounces (737 g) sonkorta budada ah sifeeyey
Kuleyli foornada ilaa 350F oo diyaari laba 8 'digsiyo keeg ah ama seddex 6' oo ah keeg leh keeg goobeed ama buufin la doorbiday. Hubso in maaddooyinkaaga qabow yihiin dhammaan heerkulka qolka. Ka eeg qoraalada qaybta hoose ee habka cuntada wixii faahfaahin ah.
Si qafiif ah isugu ururi ukunta heerkulkaaga, saliidda, caano subagga, khalka, subagga la dhalaalay, vaniljyada iyo midabaynta cuntada oo dhinac iska dhig.
Isku dar bur, sonkor, soodhaha, budada kookaha iyo milix weelka qashinkaaga istaaggaaga
Ku dar isku darkaaga ukunta isku dar burkaaga oo ku dar xawaare dhexdhexaad ah illaa hal daqiiqo illaa inta la isku darayo
U qaybi baytariyada digsiyada keega oo dubi ilaa 35-40 daqiiqo ama ilaa cadayga uu si nadiif ah uga soo baxayo. Lammaane si fiican ugu leh kareemkeena kareemka kareemka.
Tilmaamaha Feejiska farmaajada farmaajo
Ku rid subagga jilicsan ee weelka dhajiskaaga istaagga leh lifaaqa kuuskuubka iyo kareemka hooseeya illaa inta siman oo uusan lahayn buurbuur.
Dhig farmaajada jilicsan ee baaquli baaquli subagga qaybo yar yar iyo kareem hoose illaa inta ay ka siman yihiin oo la isku darayo
Ku dar sonkorta budada ah ee la sifeeyay hal koob markiiba ilaa inta la isku darayo, oo isku walaaq hooseeya
Kudar liintaada laga soo saaray iyo milixda
Qabooji keeggaaga la qaboojiyey sidaad rabto una adeegso heerkulka qolka. Qaboojinta farmaajada kareemka waa in la qaboojiyaa ilaa dhowr saacadood (2-3) ka hor inta keega la bixin.
Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay inaad Ogaato Kahor Intaadan Bilaabin 1. U soo qaado dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay heerkulka qolka ama xitaa xoogaa diiran (ukumo, caano subag, subag, iwm) si loo hubiyo in dubkaagu uusan jebin ama uusan curricamaynin. 2. U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo faraynin (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada. 3. Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku jira). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara. 4. Qabooji keegaaga ka hor dhaxan iyo buuxin. Waad ku daboolan kartaa keega barafoobay oo la qaboojiyey ee xiisaha leh haddii aad rabto. Keeggan sidoo kale waa u fiican yahay isku dhejinta. Had iyo jeer waxaan ku hayaa keegayaga in aan ku qaboojiyo qaboojiyaha ka hor intaan la keenin si loogu qaado gaadiid fudud.
U adeegida:1adeegaya|Kalori:446kcal(22%)|Kaarboohaydraytyada:59g(labaatan%)|Protein:3g(6%)|Dufan:22g(3. 4%)|Dufan Dufan:shan iyo tobang(75%)|Kalastarol:54mg(18%)|Sodium:305mg(13%)|Kaliumperyamper:59mg(laba%)|Sonkor:Afar. Shang(konton%)|Vitamin A:480IU(10%)|Kaalshiyam:32mg(3%)|Bir:1mg(6%)
muxuu ula jeedaa nike swoosh
waa kubbad masduulaagii z anime
sida loo sameeyo baraf dhaldhalaalaan ee keega
maxaa ku cusub netflix bishii oktoobar